Ninka ugu taajirsan dunida oo sheegay inuu “iskaabulo” noqonayo | Saxil News Network
Ninka ugu taajirsan dunida oo sheegay inuu “iskaabulo” noqonayo
January 10, 2019 - Written by editor
Image captionJeff Bezos waxaa loo aqoonsaday qofka ugu taajirsan guud ahaan dunida
Jeff Bezos oo ah madaxa shirkadda qalabka elektarooniga ee Amazon iyo xaaskiisa MacKenzie ayaa is furaya ka dib markii ay qoys wada ahaayeen muddo 25 sano ah.
Lamaanahan ayaa warka ku saabsan furriinkooda ugu dhawaaqay bayaan ay si wada jir ah Arbacadii u soo dhigeen barta Twiter-ka.
“Ka dib wakhti dheer oo ay naga dhex jirtay isfaham darro, isla markaana aan marar badan isku daynay inaan kala tagno, waxaan hadda go’aansannay inaan is furno, nolosheennana aan sii wadanno annagoo saaxiibo ah”, ayey lamaanaha ku yiraahdeen bayaankooda.
Amazon oo la aasasay 25 sano ka hor ayaa isbuucan dhaqaale ahaan ka hor martay shirkadda Microsoft, waxayna noqotay shirkadda xilligan ugu qiimaha badan guud ahaan dunida.
Sideed qof oo ka taajirsan kalabar dadka dunida
Sidee Bilyan-dheer lagu noqdaa?
Maxkamad diidday in Amazon macdan laga qodo
Mr Bezos, oo 54 sano jir ah, oo aasaasay Amazon ayaa loo aqoonsan yahay inuu noqday qofka ugu maalqabeensan caalamka, sida laga soo xigtay shirkad qiimeysa hantida shakhsiyaadka bilyaneerrada ah ee dunida, oo lagu magacaabo Bloomberg Billionaire Index.
Waxay hantidiisa gaareysaa lacag lagu qiyaasay $137 bilyan oo doolar, isagoo ilaa $45 bilyan oo doolar ka sarreeya hantida uu heysto maal qabeenka caanka ah ee la yiraahdo Bill Gates.
Xaaskiisa MacKenzie Bezos oo jirta 48 sano ayaa ah qoraa, waxayna soo saartay labo buug oo soo kala baxay sannadihii 2005-tii iyo 2013-kii.
“Waxaan dareemeynaa inaan aad u nasiib badan nahay maadaama aan is helnay, waxaana ku faraxsan nahay inaan lamaane ahayn sannad kasta oo ka mid ah muddadaas ka soo wareegtay xilligii aan isguursannay”, ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay lamaanahan maalqabeennada ah.
Waxaa sidoo kale lagu daray: “Haddii aan ogaan lahayn inaan kala tagi doonno 25 sano ka dib, guurkeenna oo dhan waan soo billaabi lahayn mar kale. Waxaan isla soo wadaagnay nolol aad u qurux badan waxaana hadda aragnaa inuu naga horreeyo mustaqbal wanaagsan, waalid ahaan, saaxiib ahaan iyo iskaashato ahaanba”.
Sannadkii la soo dhaafay waxay lamaanahan si wada jir ah u fulinayeen mashruuc loogu tala galay in lagu caawiyo dadka hoy la’aanta ah iyo in lagu dhiso iskuullo ay dhigtaan carruurta ka soo jeeda qoysaska saboolka ah.
Mr Bezos oo u dhashay dalka Mareykanka iyo xaaskiisa ayaa leh 4 carruur ah oo isugu jira 3 wiil oo ay dhaleen iyo 1 gabar oo ay soo korsadeen.
Image captionLamaanahan ayaa is guursaday sannadkii 1993-kii
Warbaahinta dalka Mareykanka ayaa soo tabisay in Mr Bezos uu xiriir khaas ah la sameeyay haweeney horay wariye uga ahaan jitay telefishinka Fox TV, taasoo lagu magacaabo Lauren Sánchez.
Waxaa la isla dhex marayay in Ms Sánchez ay “is arkayeen” Mr Bezos ilaa dabayaaqada sannadkii lasoo dhaafay.
MacKenzie Bezos oo sannadkii 2013-kii wareysi siisay Majalladda Vogue Magazine ayaa sheegtay in ay Jeff la kulantay xilli uu ka qaadayay wareysi ay shaqo ku dooneysay, iyadoo ku sugneyd magaalada New York.
Waxay is mehersadeen 3 bilood ka dib wakhtigaas, iyagoo wax yar ka dibna is guursaday sannadkii 1993-kii.
1 sano ka dib xilligaas ayuu Jeff aasaasay shirkadda Amazon – taasoo ku billaabatay shirkad buugaagta ku iibisa dhinaca internet-ka.
Shirkaddiisa ayaa markii dambe yeelatay ganacsi aad u baaxad weyn.
Markii suuqa saamiyada ee Mareykanka la xirayay maalintii Isniinta ahayd, Amazon wuxuu qiimeheeda ahaa $797bilyan oo doolar oo u dhiganta (£634bilyan oo gini).
Waxay sare u kacday 3.4% waxayna dhaqaale ahaan kor u dhaaftay shirkadda Microsoft, oo uu qiimaheedu ahaa $789bn